Heerkulka ugu fiican ee talaajadda iyo qaboojiyaha | Bezzia
Maria vazquez | 10/05/2022 12:00 | Karinta
Laba sano ka hor waxaan la wadaagnay Bezzia furayaasha madbakh aad u tayo badan leh. Waxaan markaas ka hadalnay muhiimadda ay leedahay waxtarka iyo isticmaalka habboon ee qalabka korontada, anagoo xusnayna qaboojiyaha ugu fiican iyo heerkulka qaboojiyaha.
Maanta waxaynu wax yar ka sii soconaa anagoo falanqaynayna muhiimada heerkulkan uu ku tiirsan yahay, maaha oo kaliya ilaalinta cuntada, laakiin sidoo kale kaydinta biilka korontada. Ma rabtaa inaad ogaato heerkulka ay tahay inaad dejiso qaboojiyahaaga ama qaboojiyahaaga marka lagu rakibo?
1 Muhiimadda heerkulka ku habboon
2 Heerkulka ugu habboon
2.1 Sideen u hagaajiyaa heerkulka?
Muhiimadda heerkulka ku habboon
Qaboojintu waxay abuurtaa a dib u dhac ku yimid korriinka noolaha sida bakteeriyada laga heli karo cuntada, iyadoo lagu ilaalinayo xaalado ammaan oo wanaagsan oo la isticmaalo. Arrin muhim ah oo ku filan in fiiro gaar ah loo yeesho, miyaadan u malaynayn?
Doorashada heerkulka saxda ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad ilaaliso cunto cusub oo dheer iyo/ama xaalad wanaagsan ku sugan tahay. Markaa ma yaraynayso oo keliya khataraha ka imanaya isticmaalkeeda, laakiin sidoo kale waxaad yaraynaysaa qashinka cuntada. Oo maya, had iyo jeer maaha doorashada heerkulka ugu qabow ee qalabku noo ogolaado, waa go'aanka ugu fiican. Waxa laga yaabaa in aad tamar ku bixinayso si aan loo baahnayn oo aad keento in cuntooyinka qaarkood ay dhaqso u xumaadaan.
Qaboojiyaha iyo qaboojiyaha ayaa xisaabiya ilaa 22% wadarta qiimaha korontada Guryaha marka loo eego IDAE iyo ilaa 31% marka loo eego daraasadaha OCU. Ma yihiin qalabyada isticmaala tamar badan, maadaama ay si joogto ah u sameeyaan. Iyo darajo kasta oo Celsius ah oo aan hoos u dhigno heerkulbeeggaaga waxay la macno tahay kharash koronto oo dheeraad ah oo u dhexeeya 7 iyo 10%. Boqolkiiba taasoo keeni doonta korodhka kharashka dhammaadka bisha.
Heerkulka ugu habboon
Marka loo eego talooyinka khubarada iyo soo-saareyaasha la heerkulka qaboojiyaha ugu fiican waa ku dhawaad ​​4°C. Inkasta oo ay u qalmaan kala duwanaansho yar oo u dhexeeya 2 iyo 8 digrii, taas oo ku xidhan sida uu faaruqsan yahay ama u buuxsamo talaajadu. Waxayna tahay in cuntada si loo ilaaliyo oo talaajadu si sax ah u shaqeyso marka lagu daro ilaalinta heerkulka ku habboon, waxaa jira tilmaamo taxane ah oo ay tahay inaad raacdo:
Iska ilaali inaad cunto kulul soo bandhigto; had iyo jeer u ogolow inay qaboojiyaan ka hor inta aanad ku kaydin.
Ha buuxin dhammaan jidka, si loo oggolaado wareegga bilaashka ah ee hawada qabow. Haddii aad sameyso, hoos u dhig heerkulka hal darajo.
had iyo jeer badbaadi cuntooyinka bacaysan ama weel aan hawo lahayn.
Fiiri talaajadda toddobaad kasta oo ka saar cuntada aan hadda wanaagsanayn.
had iyo jeer nadiifi, ka saara nooc kasta oo dareere ah oo laga yaabo inuu daatay.
Dhinaca kale, heerkulka qaboojiyaha ugu fiican heerkulka -17 ° C ama -18 ° C. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in la ogaado in dulinnada suurtagalka ah (sida Anisakis ee kalluunka ama Toxoplasma gondi ee hilibka) aysan u keenin khatar caafimaad, waxaa lagama maarmaan ah in la qaboojiyo cuntada ugu yaraan 5 maalmood ka hor isticmaalka.
Sideen u hagaajiyaa heerkulka?
Waa wax caadi ah in marka aanu iibsano talaajad, ay yimaadaan, noo rakibaan oo aan iloobin inaan hubinno heerkulka oo aan hagaajinno haddii loo baahdo. Talaagadaha ugu casrisan iyo/ama ugu sarreeya, qalliinkan waxa lagu samayn karaa iyada oo loo marayo kontaroolada dhijitaalka ah. Kuwaani waxay badanaa ku yaalaan xagga hore ama albaabka talaajadda. Talaagadaha da'da weyn ama kuwa hoose, si kastaba ha ahaatee, ma laha kontarooladaan oo waxay ku qariyaan taayirrada xakamaynta gudaha.
La giraangiraha xakamaynta Waxay leedahay qaar ka mid ah tilmaamayaasha noo ogolaanaya inaan nidaamino heerkulka. Tilmaamayaashani inta badan waa lambarro laga bilaabo 1 ilaa 7 ama 1 ilaa 10 kuwaas oo aan si toos ah ula xidhiidhin heerkulka laakiin xagga xoojinta (lambarku waa ka sarreeyaa, wuu sii qabowsan yahay). Xaaladahan, sida kaliya ee lagu ogaan karo heerkulku waa in la geliyo heerkulbeeg qaboojiyaha oo lagu ciyaaro giraangiraha ilaa aan ka soo dhowaaneyno heerkulka ku habboon.
Ma ogtahay heerkulka ugu fiican ee qaboojiyaha iyo qaboojiyaha wuxuu ahaa? Ma dib u eegis ku sameyn doontaa oo ma cusbooneysiin doontaa qalabkaaga ka dib markaad akhrido maqaalkan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Karinta » Heerkulka ugu habboon qaboojiyaha iyo qaboojiyaha